कबीरदास हिन्दु थिए कि मुसलमान ?- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १३, २०७८ दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौँ — कबीरबारे राजनीतिक विश्लेषक सीके लालको ‘कोसेली’ मा अग्रलेख 'कहत कबीर सुनो भाई साधो !' पढ्ने सुअवसर प्राप्त भयो । कता–कता दालमा नुन नपुग्याजस्तो लागेर केही लेख्न मन लाग्यो ।
भगवान् त हाम्रो चारैतिर छन् होइन ? फेरि हामी मन्दिर–मस्जिद किन खोज्छौं ?
कबीरदासको जीवनको सन्देश यही हो । यसलाई बुझ्न हामीले दुनियाँभरका ग्रन्थ किन पढ्नुपर्‍यो ?
हेर्नुस् कबीरको दर्शनः
जो चित देखौं आपना, मुझसा बुरा न कोय ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७८ १५:३९
माघ १८, २०७६ दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौँ — म जनकपुरको सबेला बजारमा जन्मिएँ । बुबा काशीबहादुर (‘उदय’ का संस्थापक सम्पादक) ले आमा गर्भवती भएपछि ससुराली लिएर जानुभएको थियो । दुई सन्तान जन्मिनेबित्तिकै कालकवलित भएकाले म गर्भमा आएपछि ‘रिस्क’ लिन चाहनुभएन । ससुरा महोत्तरी मालमा मुखिया थिए । त्यहीं थिए आनन्दबहादुरका पिताजी ।
सुब्बा बुबाको चिनजान आनन्दबहादुरसँग त्यहीं भएको हो । यही चिनजानको परिणाम १९९३ सालमा ‘उदय’ उदायो । म १९९५ सालमा ।
हजुरआमाले मेरो नामकरण गर्नुभयो– ‘दुर्गाप्रसाद’ । सबेला बजारमा दसैंमा स्थापना गरिने ‘दुर्गोत्सव’ मा उहाँले दुर्गाजीलाई भाकल गर्नुभएको थियो रे । म पाँच वर्ष भएपछि मात्र सासूले ज्वाइँलाई स्वास्नी–छोरा बनारस लैजाने अनुमति दिनुभयो रे !
सात वर्षको भएपछि मलाई गंगा किनारस्थित ‘संकटा मन्दिर’ अगाडि ‘बालनिकेतन’ स्कुलमा भर्ना गरियो । त्योबेला एलकेजी, यूकेजी भन्ने थिएन । ‘शिशु कक्षा’ मा भर्ना भएँ । त्यहाँ पाँच कक्षासम्म पढेपछि घरनजिकै ‘अग्रवाल महाजनी हाइस्कुल’ मा भर्ना गरिदिए । ‘महाजन’ भनेको व्यापारी हो । त्यहाँ धेरैजसो विद्यार्थी ‘महाजनी हिसाब’ पढ्थे, यो भनेको गन्ती, दुनोटको अलावा सवैया, डेढा, अढाइया इत्यादि हो । ‘डेढा’ अर्थात् साढे एक, ‘अढाइया’ अर्थात् साढे दुई– यसलाई पनि दुनोटजस्तो कण्ठ गर्नुपर्थ्यो । जस्तो ‘डेढा’ को २ अर्थात् तीन, ‘अढाइया’ को दुई अर्थात् पाँच । हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर मुखाग्र गराउँथे ।
बुबा बनारसको ‘क्विन्स कलेज’ मा इन्ट्रेन्ससम्म पढ्नुभएको थियो । बीपी कोइराला यहीं पढ्थे रे । उनका बुबा व्यापारी थिए, त्यसैले नामी स्कुलमा पढाए । म सम्पादकको छोरा भएकाले ‘महाजनी पाठशाला’ मै पढें । हाइस्कुल पास गरेपछि आईएस्सीमा नाउँ लेखाएँ । हरिश्चन्द्र इन्टर कलेजमा । डाक्टर बन्छु भन्ने रहरले जीवविज्ञान लिएर साइन्स पढें । त्योबेला दूधविनायकतिर नेपालीको बाक्लो बसोबास थियो । र, हजुरबुबाहरू काशीबास बसेका हुँदा उनका नातिहरू पढ्न यहीं बसे ।
रामघाटमा कुलचन्द्र गौतम (विद्वत्शिरोमणि) पनि बस्थे । उनका नाति सुशीलचन्द्र मसँगै पढ्थे । उनका भाइ प्रसन्नचन्द्र पनि यहीं बसेर पढ्थे । कुलचन्द्र गौतम संस्कृतका उद्भट विद्वान् । संस्कृत पण्डितहरूको जमातमा उनको ठूलो मान थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृतमा आशु कविता प्रतियोगितामा विजयी भएका थिए र शास्त्रार्थमा विजयी हुँदा विद्वत्शिरोमणिको उपाधि पाएका थिए । कविशिरोमणि लेखनाथ जाडो छल्न दूधविनायकको धर्मशालामा आएर बस्थे । हामी उहाँलाई भेट्न जान्थ्यौं ।
त्यसबेला काशी नेपाली पुस्तक र पत्रिका प्रकाशनको ‘हब’ नै थियो । सुब्बा केदारनाथ, बाबु माधवप्रसाद शर्मा, विश्वराज हरिहरनाथ आदि प्रकाशकहरू प्रसिद्ध थिए । धार्मिक पुस्तकबाहेक पत्रपत्रिकाको प्रकाशनको पनि बनारसबाटै सुरुआत भएको हो । मोतीराम भट्टले ‘भारत जीवन पत्रिका’ तथा अन्य पत्रपत्रिकाहरूको इतिहास ‘नेपालको छापाखानाको इतिहास’ मा गृष्मबहादुर देवकोटाले यस विषयमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सुब्बा होमनाथ केदारनाथका एकजना नाति देवेन्द्र मसँगै आईएस्सीमा पढ्थे । उनीसँगै उनको घर जाँदा एक दिन ‘प्रगति’ का सम्पादक नारायण बाँस्कोटासँग भेट भयो । उहाँ ‘प्रगति’ छपाउन आउनुभएको रहेछ र नाता पर्ने हुँदा त्यहीं बस्नुभएको थियो । मेरो पनि एउटा कविता ‘प्रगति’ मा छपाइदिनुभयो र ०१७ सालमा सुब्बा होमनाथ केदारनाथको नातिनीको बिहाका लागि म काठमाडौं जाँदा मलाई ‘प्रचार विभाग’ मा तान्नुभयो ।
कम्युनिस्ट नेता र प्रधानमन्त्रीसमेत भएका मनमोहन अधिकारीले बनारसमै पढ्नुभयो । उहाँ बनारस हिन्दु युनिभर्सिटीमा पढ्नुहुन्थ्यो र स्नातक भएपछि नेपाल फर्कनुभयो । मनमोहनले यहीं पढ्थे । भूपी शेरचनले आईए गरे, मोहनराज शर्माले नेपालीमा एमए गरे, मदन भण्डारीले संस्कृतमा शास्त्री गरे ।
म पनि सन् ६१ मा बनारस हिन्दु युनिभर्सिटी पढ्थें । त्यसबेला पूरा बनारस नै नेपाली छात्रमय देखिन्थ्यो । मातृका कोइरालाका दुई छोरा विमल र कमल तथा छोरी सविता यहीं पढ्थे । दूधविनायकबाहेक रामापुरा टोल पनि नेपालीको बस्तीजस्तो देखिन्थ्यो । धरणीधर शर्मा पनि रामापुरामै कोठा भाडामा लिएर परिवारसहित बस्थे । उनकी कान्छी छोरीसँग पछि नगेन्द्र शर्मा (सम्पादक ‘अभिव्यक्ति) ले बिहा गरे ।
दाङ, चैनपुर, धरान, धनकुटा, पाल्पा, विराटनगर, सप्तरी, लहान आदिका विद्यार्थीहरू छ्यापछ्याप्ती हुन्थे । सूर्यबहादुर थापाका भतिजाहरू यहीं पढ्थे । गर्मीको बिदामा घर जाँदा मलाई सँगै घुमाउन लैजान्थे । मातृकाबाबुको घरमा एक साता बसेर म धरानमा एक जना मारवाडी विद्यार्थीको घर धरानमा बसें । त्यहाँबाट धनकुटा पुगें । उनका भतिजाहरूको घरमा बसें । सूर्यबहादुरजीसँग पनि भेटघाट भयो । उनीसँग खिचाएको एउटा फोटो पनि छ । यो ०१५–१६ सालतिरको कुरा हो । चैनपुरको साथीसँग चैनपुर जाँदा एक जना दाहाल साथीले मादी लिएर गए । त्यहाँ एउटा स्कुलमा गर्मीको छुट्टीभरि पढाएँ पनि । ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पनि पाएँ ।
बनारस पढ्न आउने विद्यार्थी यहाँ २ वर्ष बसेर पढेको भन्ने व्यहोराको ‘एफिडेभिट’ दिनुपर्ने रहेछ । अभिभावकको रूपमा म उनीहरूसँग कचहरी (कोर्ट) मा जान्थें र उनीहरूको जिम्मा लिन्थें ।
बनारस पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि एउटा सहुलियत नै थियो– उनीहरूका हजुरबा, बज्यै यहाँ ‘काशीवास’ बस्न आउँथे । उनीहरू नेपालबाट चाहिने अन्न, घ्यू, तेल ल्याएर काम चलाउँथे । प्रसिद्ध लेखक जगदीश घिमिरेका दुई भाइ दिनेश र मुकुन्द (हाल अभिव्यक्ति पत्रिकाका सम्पादक नगेन्द्र शर्मा) ले पनि यहीं शिक्षा पाएका हुन् । कोषराज रेग्मी, बालकृष्ण पोखरेल, तारानाथ शर्मा, बल्लभमणि दाहाल, चूडानाथ रेग्मी आदि–आदि नेपालीका मूर्धन्य सेवकहरू सबैले बनारसमै शिक्षा प्राप्त गरे ।
त्यो बनारसबाट विद्यार्थी संघको तीनवटा वार्षिक मुखपत्र प्रकाशित हुन्थे– छात्रवाणी, छात्रदूत र छात्रसन्देश । अंग्रेजी मात्र होइन, संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी पनि त्यतिकै थिए । अहिले अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीहरू लगभग शून्य छन्, तर संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूको भरमार छ ।
कमलमणि दीक्षितले पनि बीएयूमा पढेका थिए स्नातक तहसम्म । सुब्बा होमनाथ केदारनाथको वंशका कोही पनि छैनन् । उनको कम्पनी अहिले उनका म्यानेजरले चलाइरहेका छन् । ‘बाबु माधवप्रसाद शर्मा’ को कम्पनी उनका छोरा सागर रेग्मीले चलाइरहेका छन् भने विश्वराज हरिहरनाथको फर्म अहिले उनका नातिले ‘बम्बई पुस्तकालय’ को नाउँले चलाइरहेका छन् । बडागुरुज्यूको घर पनि बिक्री भइसक्यो । केशरशमशेरको केशर महल, जगदम्बा रानीको भुल्लनपुरको जग्गा, राणा प्रधानमन्त्रीहरूका महल अहिले स्थानीहरूका सम्पत्ति भइसके । गुठी संस्थानको स्वामित्व रहेको नेपाली मन्दिर (रणबहादुर शाहले बनाएको) एउटा बाँचेको छ, जहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू संस्कृत पढ्छन् । यहाँ धर्मशाला पनि सञ्चालित छ ।
दूधविनायकमा रानी जगदम्बाले बनाइदिएको नेपाली धर्मशाला अहिले चाडपर्वमा नेपाली यात्रुहरूको आश्रयस्थल भएको छ । कात्तिक महिनामा कात्तिक नुहाउनेहरू, सोह्र श्राद्धमा गयाजी श्राद्ध गर्ने जानेहरूले यो भरिभराउ हुन्छ । तर, त्यो बेलाको बनारसको शान अब छैन । कुनै जमानामा गोदौलिया चौरस्ताको पानदोकानमा पान खायो भने जाडोमा पनि कान तातो हुन्थ्यो । चाटका लागि एक–दुई पसल छन् तर त्योबेलाको जस्तो गल्लीगल्लीमा चाट पसल भेटिँदैन । न त ‘लस्सी’ नै त्यो समयजस्तो देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले काशीबाट चुनाव जितेकाले यसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा त गरे तर ‘बनारसीपन’ लोप हुँदै जाँदै छ । पहिलेजस्तो ‘निश्चिन्त’ भएर जे लगाए पनि हुने, जे खाए पनि हुने ‘फक्कड’ मस्ती अब हराउँदै छ । बनारस अब भीडभाडमा हराउँदै छ । ‘आधुनिकीकरण’ मा कहाँ त्यति फुर्सद हुन्छ र !
बनारस खाने कुरा, मिठाई, चाटहरूका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो । जाडोमा ‘मलैयो’ (दूधको फिंज काढेर केशर–पेस्ता हालेर बनाएको परिकार) कचौडी खाने मज्जा हुन्थ्यो । ती सब गल्लीहरूमा पाइन्थ्यो । बनारस साहित्यको केन्द्र थियो । प्रेमचन्दजस्ता उपन्यासकार, जयशंकर प्रसादजस्ता महाकवि मात्रै होइन, गोपीनाथ कविराजजस्ता पुरामनोविज्ञानका ज्ञाता, जगन्नाथ प्रसाद मिश्रजस्ता कवि, हजारीप्रसाद द्विवेदीजस्ता विद्वान्को साधनास्थल यहीं थियो ।
लाहिडी महाशय, बाबा किनाराम, ‘मन चंगा त कठौती में गंगा’ भन्ने सन्त रैदास, तैलंग स्वामी, कबीरदास, तुलसीदासजस्ता युगपुरुषहरूको साधनास्थल यहीं थियो । विगत दशकसम्म यो साहित्यको केन्द्र पनि थियो । हिन्दी साहित्यको प्रकाशन केन्द्र मुख्यतः बनारस नै थियो । अहिले साहित्यिक प्रकाशक खोज्दा पनि पाइँदैन । साहित्यिक प्रकाशकको सट्टा स्कुली किताबका प्रकाशक भइसकेका छन् । विद्युतीय उपकरणहरूको पढ्ने–लेख्ने बानी शून्य भइसकेको छ । पुस्तक प्रकाशनको केन्द्र अब दिल्ली भएको छ, जहाँ सरकारी पुस्तकालयमा सप्लाईको भरमा प्रकाशकहरू जेनतेन बाँचिरहेका छन् ।
लागू भएपछि ‘बनारसी साडी’ को व्यवसायले ‘जीएसटी’ आखिरी सास फेर्दर् ैछ । जुन साडी बिहामा नभई नहुने थिए, ती अब महँगा भएर फेसन शोहरूमा मात्र देखिन्छन् । बनारसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना भइरहेछ । त्यसबेला भएको मूलभूत सौन्दर्य, जसलाई ‘हेरिटेज सहर’ भनिन्छ त्यो रहला ? यसका प्राचीन धरोहर र गौरवलाई मेट्रो, रिङरोड र नवीन सभ्यताले नखाइदेला ?
बनारसलाई ‘क्योटो’ बनाउने सपना देख्नेहरूले त्यस्तै नागरिक र सभ्यता पनि सिर्जना गर्नुपर्छ । सपना भंग पनि हुन सक्छ ।
‘जीएसजी’ ले गर्दा एउटा अर्को फसाद नेपाललाई परेको छ । यहाँबाट आउने धार्मिक किताबको सप्लाई बन्द छ । त्यहाँका प्रमुख प्रकाशक ‘ज्ञान मण्डल लिमिटेड’ लाई सोध्दा भने, ‘कहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेसन गराउने ? त्यसको हिसाब राख्न एउटा अर्को एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्‍यो । त्यसको तलब जति पनि किताब सप्लाई हुँदैन । बरु नपठाएको आनन्द ! नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी !’
प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ११:४९
जसले नेपालमा रसायनशास्त्रको जग बसाले